Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Ilmo-soo-qaadid-is-Maamuleed oo Dawooyin leh Hadda Loo Arkay Ammaan
Maanta, Daraasada Habka Waxtarka iyo Waxtarka Leh ee Waxbarasho ayaa lagu daabacay The Lancet Global Health. U doodayaasha ilmo iska soo rididda badbaadada leh ee Colectiva Feminista La Revuelta de Neuquén (Argentina), GIWYN (Nigeria), iyo Koonfur-bari Aasiya, oo ay weheliyaan cilmi-baarayaasha Ibis Health Reproductive Health (Koonfur Afrika iyo USA), naqshadeeyay oo hirgeliyay daraasadda SAFE.
Daraasadda SAFE, oo ah daraasaddii ugu horreysay ee nooceeda ah, waxay shaqaaleysiisey in ka badan 1,000 qof oo la soo xiriiray koox la socota ilmo iska soo ridid ​​ammaan ah oo Argentina ama Nigeria ah, waxay daba socdeen muddo ku dhow hal bil, waxayna cabbireen natiijooyinka waayo-aragnimadooda ilmo iska soo rididda ee ay iskood u maareeyeen, iyadoo ilmo iska soo rididda ay dhammaystireen iyada oo aan qaliin lagu samayn. faragelinta sida natiijada aasaasiga ah.
Ilmo iska soo rididda daawada is-maamulka ah waxay ku lug leedahay isticmaalka mid ka mid ah labada hab ee daawaynta si loo joojiyo uurka iyada oo aan la socon kormeer caafimaad oo ay ku taliso Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO). Dawooyinka WHO ay ku taliso ee mifepristone oo ay weheliso misoprostol, ama misoprostol oo keliya, ayaa loo dejiyay habab badbaado leh oo waxtar leh oo lagu joojinayo uurka goobaha caafimaadka. Ilmo soo rididda iskeed isu maamusho oo wehelinaysa waxay ku lug leedahay la-taliyeyaal ilmo soo rididda oo aan caafimaad ahayn oo bixiya macluumaad caddayn ku salaysan oo ku saabsan isticmaalka dawada ilmo iska soo rididda, iyo sidoo kale naxariis niyadeed (iyo mararka qaarkood taageero jireed), inta lagu jiro habka uu qofku iskii u maareeyo daawada ilmo iska soo rididda. Lasoco ilmo soo rididda waxa lagu bixiyaa telefoonka, iyada oo loo marayo aaladaha fariimaha dhijitaalka ah ee sugan, iyo/ama qof ahaan.
Daraasada SAFE waxay xoojisaa cadaymo jira oo jira, xogta saxda ah, dadku waxay si badbaado leh oo wax ku ool ah u isticmaali karaan daawooyinka si ay u joojiyaan uurka meel ka baxsan goob caafimaad. Natiijooyinkani waxay muujinayaan caddaynta caafimaad-darrada ee daryeelka ilmo soo rididda hore, waxayna taageeraan muhiimadda sii wadida helitaanka moodooyinka fog fog ee daawada ilmo iska soo rididda - oo ay ku jiraan telemedicine - oo laga hirgeliyay dalal dhowr ah natiijada masiibada COVID-19. Natiijooyinka daraasaddan ayaa sidoo kale soo jeedinaya in SMA oo taageero ka heleysa taageerada wehelka ay noqon karto istaraatiijiyad udub dhexaad u ah ballaarinta helitaanka badbaado, daryeel ilmo soo rididda oo waxtar leh.